Namni yakkaan himatamee mana murtiitti itti murteeffame guyyaa itti mana hidhaa seenee jalqabee ji’a fi guyyaa itti kana keessaa bahu akkuma lakkaawu, Addaamis si’ool bakka adabbiin lubbuu jirutti jiraachaa waanta tureef, abdii isaaf kennamme yaaduudhaan Kadhannaa torbii isaa lakkaawaa ture. Kan dubbate kan hin hambisne, kan hin raawwannes kan hin dubbanne, Gooftaan “Kunoo sin fayyisa” akkuma jedhee waadaa isaaf galetti barichi xumuramnaan nama ta’ee foon uffateeAddaamiin ijoollota isaa waliin bilisa baaseera. Addaamiin hordofuudhaan ijoollonni isaas: abbootonni raajonni qulqulloonni Kadhannaa torbii galuudhaan bara abdii sana lakkaawuudhaan hojii gaariidhaan hordofaniiru. Bu’uura kanaan raajonni baay’een tooftaa adda addaatiin Kadhannaa torbii lakkaawaniiru. Nutis raajota Kadhannaa torbii lakkaawan muraasa barreeffama kana keessatti akkaataa armaan gadiitti ni dhiyeessina.
Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Heenook
Abbaan keenya Henook, ilma Yaareed yommuu ta’u, dhalootaan Addaam irraa isa toorbaffaadha. Innis jireenya isaatiin Waaqayyoon gammachiisuudhaaf mana isaa dhiisee Kadhannaa torbii galuun fi hojii gaarii hojjechuun Waaqayyoon tajaajileera. Adeemsa isaa guutuus Waaqayyoon akka gammachiise, Kakuu Moofaa keessattis ta’ee Kakuu Haaraatti hojiin isaa gaariin ragoomeefii jira. “Henook adeemsa isaa Waaqayyo waliin taasifate” (Uum 5:22). Kana ta’uu isaatiinis, Waaqayyo gatii Kadhannaa torbii isaa Afuura Isaa qulqulluun gargaarsa Isaatiin waan irra bulcheef raajii dubbateera, Kadhannaa torbiis lakkaaweera. Samii keessatti fudhatameeosoo jiraatuu kitaaba waa’ee ergamoota qulqullaa’oo, waa’ee Masihichaa Iyyesuus Kiristoos, waa’ee deddeebi’uu aduu fi addeessaa kan eeru maqaa isaatiin barreesseera. Uum 5:21-24, Yihudaa lakk 14, Heenook 1:9
Subaa’ee Henook jedhamuun kan beekamu sun Kadhannaa torbii Henook safartuudhaan lakkaawee waan ta’eefi dha. Safartuun isaas lakkoofsa baay’ataa 35 yoo ta’u, 35x19 bu’aa isaatiin yoo baay’atu waggaa 665 ni ta’a. 665 x12 yommuu baay’isnu, 7980 ta’a. Yaadni kunis kan nu hubachiisu waa’ee dhufaatii Kiristoosiidha.
Addunyaan erga uumamee jalqabee bara nuti amma itti qaqqabne waggoota 7,509 ni ta’a. Kanas mirkaneessuudhaaf, waggaa 5500 irratti waggoottan 2009 ida’uudhaanii dha. Yeroo kanas waggaa armaan olitti keenye, 7,509 nuuf kenna. Akkaataa bu’uura lakkaawwii raajicha Henookitti, dhufaatiin Kiristoos bara 7980 tti ta’a. Armaan olitti lakkoofsa Henook lakkaawe qabachuun waggaa 7980 irra waggaa amma keessa jirru, 7,509 yoo hir’isnu waggaa 471 ni arganna. Kanaafuu, bu’uura Kadhannaa torbii Henookiin dhufaatii Kiristoos tahuudhaaf waggaan 471 ni hafa jechuudha.
Kadhannaa Torbii (subaa’ee) Daawiit
Raajichi Daawiit mootota Isra’eel keessaa mootii guddaa fi jaallatamaa ture. Barri mootummaa isaas Dhaloota Kiristoos Dura bara 1011-971 akka ture ni amnama. Raajichi Dawiit, akka laphee Waaqayyoo ta’uu isaati raajii dubbateera. Kadhannaa toorbiis lakkaaweera. Kunis lakkaawwii (Subaa’ee) Daawiit jedhamuudhaan beekama. “Waggaan kumni Si fuulduratti akka guyyaa kaleessa darbiteetii” (Faar 89:4) kan jedhus barsiisonni yommuu lakkaawan waggaa 1,140 ni ta’a. Kunis Gooftaa biratti waggaan 1140 akka guyyaa tokko akka ta’etti raajicha Daawwiit dubbateera. Kunis Daawitiif lakkaawwii/ safartuu Kadhannaa torbii ta’uun tajaajileera. 1,140x7=waggaa 7,980 ni ta’a. Addunyaan kun erga uumamtee kaasee waggaa 7,980tti Kiristoos lammaffaa akka dhufu kan agarsiisuu dha.
Kadhannaa Toorbii (subaa’ee) Daani’eel
Raajichi Daani’eel ramaddiin isaa raajota gurguddoo keessatti dha. Israa’eloonni booji’amanii yommuu gara Baabiloon deeman, booji’amee gara Baabiloonitti bu’eera. Innis waa’ee dhufaatii Kiristoos raajii dubbateera; Kadhannaa toorbiis lakkaaweera. “Sanbata toorbaatama lamiilee kee beellami” jedheera. Kunis Kiristoos waggoota 490 ykn (7 x 70) booda nama ta’uusaa raajii ibsu dha. “Hanga mooticha Kiristoostti, Manni Qulqullummaan ni ijaaramti, boodarras ni jigdi” jechuudhaanis dubbateera.
Tooftaan lakkaawuu isaa waggaadhaan yommuu ta’u, kunis waggoottan toorban akka Iyyaasuutti lakkaawuudhaanii dha. Kadhannaan toorbii kun Sanbata jedhama. Daani’eel Kadhannaa toorbii erga lakkaawee fi raajii erga dubbatee kaasee hanga Kiristoos dhalatutti waggaa 490 ni ta’a. Safartuun (baay’istuun) isaas torba yommuu ta’u, 7x70 yoo baay’isnu 490 ni arganna. Kunis raaj-himeessichi raajii erga dubbatee fi Kadhannaa torbii (subaa’ee) erga lakkaawwatee waggoota 490 booda dhalachuu Kiristoos kan ibsuudha.
Walumaa galatti, raajonni qulqulloonni armaan olitti ilaalle adeemsa isaanii Waaqayyo waliin taasisuudhaan, Kadhannaa torbii galuudhaan, qajeelinaan jiraachuu isaaniitiin ajaa’iba kan ta’e dhalachuu fi deebi’ee dhufuu Kiristoos raajuudhaaf danda’aniiru. Kadhannaa torbii galuudhaan kan fagaate dhiyeessuu, kan hin mul’anne ol-baasanii mul’isuuf Waaqayyo biraa gahumsa kan argamsiisu ogummaa Afuurawaa ta’uusaa hubachuun barbaachisaa dha